Abukar Arman: Sidii Soomaaliya “Mar Kale loo Bilay” Sida Ameerika! – Radio Daljir
Abukar Arman: Sidii Soomaaliya “Mar Kale loo Bilay” Sida Ameerika!
Seteembar 5, 2020 9:53 g 0
Asbuucyadii la soo dhaafay amuuro badan oo isbiirsaday oo leh midabyo kala jaar ah watana khataro kala daran baa siyaasadda Soomaaliya sii fogeeyey. Sannadkan oo ah kii ugu danbeeyey xukuumadda hadda, caqabadaha noocaan oo kale ah ma aha kuwo cusub, laakiin awoodda iyo isbaddalada isbiirsaday ee ammuurahaan ay wataan waa kuwo ku cusub saaxadda siyaasadda dalka.
Saas oo ammuuruhu yihiin, haddana, qoraalkan ma aha iskuday taxaya caqabadahaas, fartana ku fiiqaya qolo ama siyaasadda qolo kale, laakiin waa mid muujinaya sida siyaasadda wasakhaysan ee aan aragtida fog ku salaysneyn ee dalku ay u tahay mid diiradda ka leexisa danta qaranka Soomaaliyeed, diiddana in la fahmo ama la ogaado danaha ugaadhsatada caalamka ee u soo suxul-duubtay dhaca kheyraadka dalka iyo ka gungaarka danta mid walba u gaarka ah oo kaliya.
Siyaasadahaas is diiddan tan ugu horraysaa waa tan ay falkiyeen dibloomaansiyiinta aan waxba xeerin ee Mareykanka oo si hoose afgambi ula beegsaday dhiggooda Ingiriiska ee qorshahoodu ahaa in ay difaacaan oo meelmariyaan danaha gaarka ah ee shirkadda Soma Oil and Gas. Dibloomaasiyiintaan uma huggaansamaan mana addeecaan shuruucda caalamiga ah waxayna badanaa falkiyaan taatikooyin la isku hoosaasiyo oo midkoodna ha ahaato Wasaaradda Arrimaha Dibadda Boqortooyada Ingiriiska ama tan Arrimaha Dibadda ee Mareykanku aysan waligood bannaanka soo dhigin.
Yaan Dabka Afuufin?
Maalinkii Sabtida oo taariikhdu ahayd 25 Luulyo, Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaa ay isugu yimaadeen kulan aan caadi ahayn, kaas oo ay ku meelmariyeen mooshin kalsoonida loogala laabtay Raysul Wasaare Xasan Cali Kheyre. Kalsooni kala laabashada ayaa ku soo aadday waqti xasaasi ah oo uu taaganyahay muranka doorashada dalka ka qabsoomi doonta iyo xiriirka ka dhexeeya Dowladda Federaalka iyo maamulada dalka oo sii kala fogaanaya.
Waxaa xiiso gooni ah xambaarsan in xil-ka-xayuubinta Kheyre ay ku soo beegantay maalmo kooban kaddib markii ay si guuli ku dheehantaay uu u soo abaabulay Heshiiskii Dhuusamareeb ayna wada saxiixeen Madaxweyne Farmaajo iyo maamul goboleedyaduba, isla markaasna ay xilhayntii xukuumadda ka dhimmantaay wax ka yar lix bilood.
Kulankii Baarlamaanka kaddib markii waxyar la iska yiri ajendihii miiska saarnaa, Guddoomiyaha Baarlamaanku Mursal Maxamed waxa uu isla markiiba meelmariyey mooshin kalsooni-la’aan oo aan ajandahaba ku jirin, waxa uuna dhegaha ka furaystay qodobo xeer hoosaadka barlamaanka oo ay keeneen qayb xildhibaanadu, waxa uuna meeshiisii ka sii watay tirinta codadka. Saacad gudaheed iyo meelahaas, Raysal Wasaare Kheyre waa la siibay: ‘haah’ 170 & ‘maya’ 8. Xoogaa sawaxan ah oo ay ku dhawaaqayeen xildhibaano xaajada diidani kabacdi xukunkii waa la meelmariyey. Hadafkiina waa laga guul gaaray.
Dagaalka Qaboow ee ka Dhexeeya Iskaashatada
Inkasta oo badanaa la saadaalinayey in salka xaajadu ahayd hawlihii la wada yaqaanay ee siyaasadda ‘xilligii kala guurka’ iyo doorashada soo fooleh, laakiin xaajadu intaas waa ay ka weynayd oo waxa ay ahayd wajigii ugu danbeeyey oo si dibloomaasinimo ku dheehantahay loo xaaqay saameynta dowladda Ingiriiska iyo hormuudkeedii Kheyre. Kheyre waxa uu ahaa Soma Oil and Gas wiilkoodii Bariga Afrika, falaanqeeyahaan siyaasaduna mar hore ayuu si adag uga horyimid magacaabistii hore.
Haddii si kale loo yiraahdo, tani waxa ay ahayd gunaanad nidaamsan oo si taxaddar ku dheehanyahay loogu afgambiyey loona soo afjaray gacan-ku-hayntii Boqortooyada Ingiriiska ee ammuuraha Soomaaliya. Waxa ay ku bilaabatay Qadar oo la faray in ay Imaaraadka isbaaro u dhigato, bixisana miisaaniyada doorashada Farmaajo. Ogow oo waxa ay ahayd hawl aad u sahlan maxaa yeelay Qadar awalba dagaal adag oo qoboow baa ka dhexeeyey ayaga iyo UAE/Sucuudiga tan iyo intii uu biloowday Gu’gii Carabtu. Intaas kaliya ma ahee waxaa xusid mudan in Qadar ay horeba dalka ku lahayd dillaaliin hawlaheeda heeggan u ah, horena lacag madow oo mashaariic loogu fuliyey u sii marsiisey Madaxweyne hore Xasan Shiikh Maxamuud.
Markii Farmaajo madaxweyne noqday, waxaa si nidaamsan u biloowday in midmid loo siibo dhidibadii Ingiriiska iyo cid walba oo xiriir la lahayd Dowladda Ingiriiska, ha ahaadeen lataliyayaal, farsamoyaqaano siyaasadeed, xeeldheerayaal hawlaha ammaanka, iyo waliba xubnihii Golaha Wasiirada ee Ingiriiska ka soojeeday ama xiriir dadban Ingiriiska la lahaa. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya waxa ay laashay xiriirkii Imaaraadka Carabta. Falkan danbe aad buu muhiim u ahaa laba siyaaboodba: waa mar e, waxaa meesha ka baxay sicii laga lisi jiray lacagta caddaanka ah ee loo isticmaalo musuqa Ingiriisku baahiyo. “Aan saaxiibaday waco” waxa uu ahaa hadal sarbeeb ah oo caanbaxay oo dibloomaasiyiinta Ingiriisku isticmaalaan macnuhuna ahaa safaaradda Imaaraadka baa lacagta bixineysa. Arrinkaan raadaarka hoostiisa ka socda waxa uu ahaa mid Ingiriiska u suurtagaliyey in aysan gacmaha iska wasakhayn. Waa marka labaad e, oo xataa laga yaabo in uu ka sii muhiimsanyahay kan hore – tallaabadani waxa ay nalka ka damisay qorshihii Imaaraadku maalgaliyey ee Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda iyo kiiskii badda (ICJ maritime case).
Inkasta oo Soomaalidu u qabto tallaabo waddaninimo ku dheehantahay oo uu qaaday madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud, laakiin xaqiiqadu saas ka fog oo tallaabadu waa mashruuc Soma Oil and Gas. Haddii Maxkamaddu (ICJ) kiiska Soomaaliya u xukunto ogow waa musuq horleh iyo Soma Oil & Gas oo hore kheyraadka dalka si sharcidarro ah loo siiyey oo mid horleh loogu daro. Farmaajo asna hawsha ma mooga oo gadaal buu waxa uu ku galay heshiis in kiiska maxkamadda ICJ lagala laabto oo Kenya “heshiis la isla gaaro” saaxiibo cusubna miiska la soo fariisiyo. Waana sababta kiiska dhowr jeer dib loogu dhigay, mana aha go’aan ay Maxkamadda ICJ kaligeed gooni u gaari karto, sida dowladda Soomaaliya sheegato. Sidaas darteed filo go’aan rasmi ah oo aan cidina la yaabi doonin kaddib markii Farmaajo meel marsado waqti kordhinta maanta miiska u saaran.
Aan ku laabto falka koowaad ee kore oo ahaa mid muhiim ah; oo kaas waxaa dabasocday tallaabo kale oo ayana muhiim ah oo lagula wareegay taliska UNSOM. Nicholas Haysom, Wakiilka Xoghayaha Guud ee QM, asaga oo laba bilood oo qura jooga ayaa lagu eedeeyey in uu farafareeyey madaxbannaanida iyo arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Inkasta oo aanan raalli ka ahayn hawlaha dibloomaasiyiinta Ingiriiska iyo hawlwadeenadooda UNSOM ay wadeen Haysom kahor, haddana waa dhaliilay cayrinta Haysom oo aan u arkayey in ay ahayd mid hoosaasin ah. La yaabna ma ahayn markii wax yar kabacdi uu Safiir James Swan badalay Safiir Haysom.
Taa waxaa dabasocotay ayadoo Qadar la faray in Raysal Wasaare Kheyre tiimka laga tuuro, lacagtii asaga iyo Farmaajo keentayna laga jaro. Kheyre iyo kooxdiisa ugaarsatada hantigoosadka ahi waxa ay laba asbuuc ka dabameeraysanayeen Dooxa ayaga oo baadigoob ugu jira lakulanka qaar kamid ragga ragga boqra. Laakiin jawaabta ay heleen waxa ay ahayd mid aad u sahlan: ciyaartii waa isbadashay saaxiib, haddana waa adiga iyo kaligaa ee nabadeey.
Kaddib markii Kheyre ay wax walba u kala caddaadeen uuna ogaaday in uusan qayb ka noqon doonin waqti kororsiga Farmaajo, boorsooyin lacag ahna uusan Qadar ka heli doonin, waxa uu doorbiday siyaasad qar-iska-tuur ah (kamikaze) iyo mashruuc uu ugu magacdaray nabadeyn. Durba waxa uu u gacanhaadiyey dowlad goboleedyada, siiba Puntland iyo Jubaland oo ayagu dowladda dhexe rajobeel ka noqday; halkaasna waxaa ka biloowday Shirkii Dhuusamareeb.
Xukunka & Khatarihiisa
Farmaajo waxa uu ka qaybgalay shirkii Dhuusamareeb asaga oo wata ajande aan tanaasul wadan: Laba sano oo muddo kordhin ah ha la iigu daro anna waxa aan falkeeda galayaa sidii aan dalka u gaarsiin lahaa ‘nidaamka doorasho ee hal-qof-hal-cod.’ Shirarkii Dhusamareeb I iyo II kabacdi, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waxa ay wada gaareen heshiis: Muddo kordhin Farmaajo heli mayo, waxaana la saarayaa guddi farsamo oo ka kooban dhammaan daneeyayaasha, guddigaas ayaana go’aamin doona nooca doorasho ee Soomaaliya ka hirgali doonta, kaas oo lagu ansixin doono Dhuusamareeb III.
13kii Agoosto, kaddib markii Kheyre bannaanka la dhigay, Farmaajo asna uu u hanqaltaagayo muddo kordhin, xafiiska Safiir Donald Yamamoto waxa uu soo tuuray Tweet-kaan:
@US2Somalia is eagerly waiting for #Dhusamareb 3 Mtg results. The need for wide spread consultations & genuine compromise is key. The election model needs broad based support from FGS, FMS, Parliament, & other stakeholders. Timely elections, no mandate extensions. #Somalia
— U.S. Embassy Mogadishu, Somalia (@US2SOMALIA) August 13, 2020
“Safaaradda USA ee Soomaaliya waxa ay si xiiso leh u sugaysaa natiijada kulanka Dhuusamareeb III. Waa in la yeesho wadatashi ballaaran, waana in la isku tanaasulo. Nooca doorasho waa in ay ahaato mid sal ballaaran, una dhanyihiin DFS, Dowlad Goboleedyada, iyo dhammaan daneeyayaasha kale. Doorashadu waa in ay watigeeda dhacdaa, muddo kordhinna maya.”
20kii Agoosto, kaddib markii uu dhacay shirkii Dhusamareeb III oo hal dhinac ahi, waxaa soo dhamaaday quraafaadkii muddo kordhinta daarnaa, isla xafiiskii Mareykankuna waxa uu mar kale soo tuuray Tweet-ka hoose:
“Safaaradda USA ee Soomaaliya waxa ay ka shaqaysay in dhammaan aragtiyada miiska Dhuusamareeb III la keeno, laakiin haddii qaar maqnaadeen waa mid iyaga u taal. Qaswadayaasha aan shirka ka soo qaybgalin waa kuwo danahooda ka hormariyey dimoqoraadiyadda. Dhinacyadu waa in ay hore u socdaan islana oggolaadaan nooc waqtiyeysan.”
In kasta oo bayaanada kore u egyihiin kuwo waqti hore la soo dhaafay loona yaqaan “waqtigii kumeelgaarka” haddana waa kuwo taageeraya maqaalkaygii kan ka horreeyey ee aan ku sheegay in Soomaaliya ay haddeerba ku jirto nooc xukun liita oo ‘Trusteeship’ ah, oo haddeerba aan dhehee waa mar e loogu talagalay in lagu raaligaliyo Ingiriiska iyo deeq-bixiyayaasha in USA aysan taageerayn muddo kordhin; waa mar kale e, in lagu cadaadiyo dowlad goboleedyada in ay dabafaylaan Farmaajo. Waa sida kaliya ee loo guran karo wixii sannado kahor la beeray. Saas oo ay tahay, haddana muddo kordhintu waa sidii tarraq lagu dul daaray barkad karosiin ah, sidaas darteed waa in loo maro nidaam sharci ah – barlamaanka federaalka.
Fulin Degdeg ah oo Haddana Fudud
Saas oo xaal yahay, Farmaajo oo ku dayanaya nidaamka magacaabista ee Trump oo ah magacaabis ‘sii haye’ si aan baarlamaanku wax su’aal uga keenin, Farmaajo waxa uu magacaabay Ra’iisul Wasaare Sii-Haye ah si uu Golaha Wasiirada u maamusho hadba sida uu rabo. Waa tusaale si cad uga horimaanaya ilaalinta dastuurka ee Farmaajo hadalhayska u ah iyo kuxadgudub awoodda dastuurku siiyey baarlamaanka federaalka. Sidaas darteed fuli, dadeji, saan rabo yeel waa sidii uu Farmaajo ka rabay Sii-Hayaha, waana sida u yeelay.
Isla maalinkii uu xilka la wareegay, Mahdi Guuleed, Sii-Hayaha Ra’iisul Wasaaruhu, waxa uu degdeg u meelmariyey dhowr mashruuc oo caalami ah, waxa uuna ayada oo aan cidna lagala tashan magacaabay saraakiil Wasaaradda Batroolka oo aan la aqoon lana baarin in ay qaadi karaan masuuliyadda sare ee lagu aaminayo. Kaagaba sii daran e, masuuliyiintaan qaabilsan hawlaha hay’addaan muhiimka ah waxa ay degdeg u meelmarin doonaan go’aano ay Soomaaliya ka gocan doonto jiilal badan. Hab maamulkan, waqtiga lagu soo beegay, iyo degdegsiinyaha go’aankaas lagu gaarayba waa kuwo abuuraya welwel aad u culus.
Horta Yaa Leh?
Ammuurahaan isbiirsaday ee sida aan kala harka lahayn u xiriirsanaa saddexdii sano iyo saa’idkii la soo dhaafay, ruxayna asaaska siyaasadda Soomaaliya waxa ay markhaati u yihiin khatarihii ay ka digayeen falaanqeeyayaasha siyaasaddu, ahaana in Soomaaliya ay ku soo fool leeyihiin dabaylo khataro badan, ka dhalanayana kheyraadka, deegaan juquraafiga iyo qabyaaladda lana ku habaaray.
Waxaa jira laba shay oo loo baahanyahay in maanka lagu hayo markii la meelmarinayo xaajo siyaasadeed ama la unkayo istaraatajiyad oo daaran arrimo gudaha ama xataa ammuuro caalami ah:
Kow, ma jiraan wax la yiraado gubasho lama filaan ah (spontaneous combustion) maxaa yeelay dhammaan ammuuraha siyaasad ku abtirsadaa waxa ay daaranyihiin ujeeddooyin daahfuran ama kuwo dahsoon, ama labadaba. Labo, haddii aadan xiiso u qabin amaba aadanba karti u lahayn in aad qiimeyso hannaanka habdhaqan ama isku xirka dhibcaha, waxaa kuu dhaanta in aad shaqo kale raadsato oo aadan tan siyaasadda isku luggoyn.
Sannadkii 2021 waa kan mana jiraan wax mug leh oo isbadalay illaa iyo doorashadii hore. Siyaasadda dalku waa mid jaahwareer la jaar noqotay, duqeynta diyaaradaha iyo daroonisku waa kuwo khadka cas garaacaya oo meel khatar ah ka deganaya, ammaankii dalkunu waa uu sii xumaanayaa, musuqmaasuqu waa xirfad sare oo weli baadigoob loogu jiro, qaranimadu ayana waa mid weli samada ku laalan, kheyraadkii dalkuna waa mid weli gacmo tirobadan ay gacmogacmaynayaan. Sidaas darteed mar haddii xaajadii siyaasadda dalku noqotay mid qabyaaladaysan, oo haddana daaran siyaasad shakhsiyeed iyo nidaam ku salaysan jaranjarada awoodda, waxaad filataaba waa shaagga dhiigmiiradka oo sii xoogeysta iyo ugaarsatada caalamka oo sii dhiirada.
Soomaaliya ayana waa rajo siyaasadeed oo dhextaal waxa aan la jecelnahay iyo xaqiiqada mirirsatay ee maanta na hor hoganeysa; u dhexaysa rabitaanka qabyaaladeysan iyo hagaajinta iyo dib-u-habeynta dowladnimo; dhex hoganeysa hilowga xorriyadda iyo garabsiinta gumeystaha; Soomaaliya maanta waa mid dhextaal rabitaanka shakhsi iyo danta guud.
Si dib-loogu-hanto Soomaaliya waa lagamamaarmaan in ay u kacaan jiilal isbiirsaday; sidoo kale waa in la helo hoggaamiyeyaal leh aragti iyo istaraatajiyad ka maran maanka qabyaaladeysan ee maanta si mar kale looga fikiro yagleelka qaran danta guud ee dalka ka hormariya dhammaan danaha kale oo idil.
Qoraalka Abukar Arman waxa uu markii hore ku qornaa afka Ingiriiska, bahda Radio Daljir ayaa tarjumay | Abukar Arman waa qoraa, diblomaasi hore, waana bulsho-u-adeege falaanqooyinkiisa siyaasadda adduunka iyo diinta aad loo daabaco, loona daalacdo
Qoraalka oo af Ingiriis ku qoran hoos riix
Abukar Arman: How Somalia Was Made ‘Great Again’
Siyaasadda & Dhaqaalaha 488 Wararka 23313
Beerelayda gobalka Galgduud oo ku tartamaya wax soo saar (dhegayso)